चुनाव र धोका खाएका जनता - धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
चुनाव र धोका खाएका जनता
प्रकाशित मिति: २०७०, २५ कार्तिक सोमबार १६:०७
कल्पना खरेल। अहिलेको संबिधानसभा चुनाबको परिबेसमा जनताहरु अलमल्ल परेका छन्,प्रजातन्त्र आए देखि पटक पटक धोका खाएका जनताहरुमा कुन दल र कुन पाटिलाइ भोट दिने भन्ने कुरा अन्योलको रनाभुलमा परेका छन् । देशको ठुलै ढुकुटी रित्याएर गरिने दोस्रो संबिधान सभाको चुनाबले के देश लाइ निकाश देलात त ? पहिले पटक पनि २ बर्षको समयलाई तोकियको संबिधान सभा ४ वर्ष लगाएर पनि संबिधान बन्न नसकेको तितो यथार्थ जनता सामु छँदैछ !
विकशित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा जनताहरु अतिनै पावर फुल हुन्छन् । जनताको ईच्छा, चाहाना, आवश्यकता अनुरुप राज्यले जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नै पर्ने हुन्छ तर हाम्रो देशमा त्यस्तो नभएर जो सत्तामा पुग्यो उसैको मात्र हाली मुहाली चल्छ । देश नै सत्तामा रहनेको मुठ्ठी भित्र रहन्छ। जे जति पावर जति पाटिवाद, नातावाद, फरियावादको दायरा भित्र रोमलिन्छ । जति पनि अबसरहरु सत्तामा रहनेको पाटीको झन्डा बोक्ने र आफन्तहरुले मात्र प्रयोग गर्न पाउछन् ।
सत्तामा रहनेहरुको आफन्त तथा पाटि भित्रको जो कोहिले जस्तो सुकै अपराध गरे पनि छुट हुन्छ । अरु गरिब, निमुखा सोझा, जनताहरु आफ्नु योग्यता, क्षमता अनुसार कुनै पनि काम गर्ने अवसर देखि बन्चित हुनु परेको छ । कुनै पनि पाटीको झन्डा नबोक्ने सिधासाधाहरु देशमा कुनै विकल्प नरहेर देश बाटै बाहिर पलायन हुनु परेको तितो यथार्थ छ । कैयौँ युवाहरु खाडी मुलुकको मरुभूमिमा चर्को घाम संगै रगत पसिना बगाउन विवश भएका छन् । देशमा विकास र निकासनै अलपत्र परेको अवस्था रहेको छ । अहिले सम्म कुनै पनि दल सत्तामा पुगेर जनता प्रति उत्तरदायि देखिएका छैनन् । के यस्तो अवस्थामा कसरि जनताहरुले कुन कुन दल, कुन वादी माथि भरोसा गर्ने ?
यहि चुनावको बेला हो नेताहरुलाई भेट गर्न सकिने, यहि बेला हो जनतामा भ्रमको खेति लगाइने, नेताहरुले जनतालाई शिखरनै चुम्ने गरि आस्वासन बाँड्ने अर्थात् दिईने ।जनतालाइ भर्यांग बनाई सिंहदरबार र संविधान सभा सम्म पुग्ने नेताहरुलाई चुनाव जिते पछी सिंहदरबारको महल कुर्सीको मोह ,गाडी मोटर, पि.ए., सुरक्षा गार्ड, पद र पावर दुरुपयोग गर्दै कमाएको धन सम्पति सम्हाल्न व्यस्त हुन्छन्। जनता माझ भेट्ने र जनताको गुनासो सुन्ने विकासको काम गर्ने फुर्सद कहाँ हुन्छ र ? विभिन्न किसिमको एजेन्डा बोकेर हिड्ने राजनेताहरुमा जनताको पहिलो प्रथामिकतामा रहेको संविधान, गास, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य प्रति अहिले सम्म ध्यान कहाँ जान सकेको छ र ?
यहि बेला हो जनताहरुले नेताहरु संग प्रश्न गर्ने । के अबको संविधान सभाको चुनाव पश्चात सम्पूर्ण जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने गरि संविधान कोरिन्छ त ? नेपालका बिभिन्न राजनीति परिवर्तनमा भारतको दिल्लीमा सम्झौता गरिएन्थियो, अब कोर्ने संविधान कहाँ र को सँग सम्झौता गरिन्छ ? के राजनेताहरुको अस्तित्व नै गुम्ने गरि विदेशीको बैशाखी टेक्नै पर्ने हो त ? गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनताहरुले लोड्सेडिंग, महंगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, फितलो कानुनी व्यबस्थाको सामना कहिले सम्म गर्नु पर्ने हो ? यो देशमा राजनीतिको नाममा नारा, जुलुस, बन्द, हडताल, गुण्डागर्दी कहिले सम्म चल्ने हो ? सुशासन भन्ने शब्द व्यवहारमा भने शुन्य, के भाषणमा मात्र पर्योग हुने हो त ?
दर्दनाक यथार्थ देश र जनताले के पाए ?
हजारौको बलिदान दिएर ल्याएको गणतन्त्रको उपलब्धि के भयो ? जवानी उमेरमा पुछिएका सिन्दुर, निराश रित्तो जिन्दगि, के पायौँ के गुमायौँ भनेर युद्दकालमा आफ्ना पति गुमाएकाहरुले तिनै नेताहरुसँग प्रश्न गर्ने हो कि ? ति जवान छोरा, जवान छोरी गुमाएका, डाँडा माथिको घाम पुत्रशोकमा शोकाकुल भएका, मृत्युलाई पर्खेर बसेका तिनै बुढा बुढी बाबु आमाहरुले आफ्ना छोरा-छोरीको रगतको अमुल्य किमतको उपलब्धि खै भनि तिनै नेताहरु संग प्रश्न गर्ने हो कि ? युद्दमा बाबु आमा गुमाएका ति निर्दोष अवोध टुहुरा बाल बच्चाहरु सडकमा खाली पेट र नांगो शरीर लिएर भौतारिँदै छन् । तिनै नानी बाबुहरुले नेताहरुसँग गणतन्त्रको उपलब्धि यहि हो भनि प्रश्न गर्ने हो कि ? युद्दमा घाइते अपाङ्ग भएका जिउँदा शहिदहरु दर्दनाक पिडासँगै पल-पल तड्पिएर मृत्युलाइ पर्खिरहेका छन् । तिनै जिउँदा शहिदहरुले नेताहरुसँग पिडा कम हुने मलमको खोजि गर्दै के उपलब्धि भयो भनि नेताहरु संग प्रश्न गर्ने हो कि ? कैयौँ युद्दमा बेपत्ता भएका परिवारले आफ्नो सन्तानको बाटो पल पल तड्पिएर हेरिरहेका छन्, तिनै नेताहरुसँग कि लास कि सास खै भनि प्रश्न गर्ने हो कि ? दर्दनाक यथार्थसँग आज देशले के पायो ? जनताले के पाए र ? के गुमाए भन्ने स्पष्ट अगाडी देखिएको अवस्थामा अहिलेको चुनावमा जनाताले अतिनै संवेदनशिल भएर विवेक प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ !
एनपि न्यूज डटनेटबाट
२०७०, २५ कार्तिक सोमबार १६:०७ मा प्रकाशित
Chintamani Rijal says:
nepal ma garne nai tyastai ho. tyaha sidha , imandar manchhe haru le kehi paudaina. sabai chor , fataha .gunda gardi , ra aapradhi haru nai tyaha fit hun6an. yahi chunab ma janata lai bivinna aaswasan diyera uniharu ko vote liyera sattama pugera uniharu kai ragat chusne kam gar6an. yastai ho nepal ko rajniti.